အမေရိကန်သမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒင် ပေးလိုက်တဲ့ သင်ခန်းစာ – Sport Gaber
အမေရိကန်သမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒင် ပေးလိုက်တဲ့ သင်ခန်းစာ
အမေရိကန်သမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒင်က အမေရိကန်တပ်တွေ အာဖကန်က ဆုတ်ခွာတာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အခုလိုပြောခဲ့ပါတယ်။
” ကျနော်တို့က အာဖကန်ကို နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးအတွက် သွားခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ ပြီးတော့ အာဖကန်နိုင်ငံကို ဘယ်လိုအနာဂတ်မျိုးဖြစ်ချင်သလဲ၊ ဘယ်စနစ်နဲ့လည်ပတ်ချင်သလဲဆိုတာ အာဖကန်ပြည်သူတွေပဲ ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ အဲဒါက သူတို့ရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ အာဖကန်အစိုးရနဲ့ခေါင်းဆောင်တွေက ဒီကိစ္စကို အတူတကွဖြေရှင်းကြရမှာပါ။ အစိုးရတစ်ရပ်တည်မြဲရေးအတွက် သူတို့မှာ လုပ်နိုင်စွမ်းအပြည့်အဝရှိပါတယ်။”
(မှတ်ချက်- unofficial translation)
“We did not go to Afghanistan to nation-build”. “And it’s the right and the responsibility of the Afghan people alone to decide their future and how they want to run their country. The Afghan government and leadership has to come together. They clearly have the capacity to sustain the government in place.”
ဒီနေရာမှာ “သွားခဲ့တယ်” ဆိုတာက 9/11 ကိစ္စပြီးနောက် အာဖကန်ကို ဝင်တိုက်တဲ့ကိစ္စကို ရည်ရွယ်တယ်လို့ နားလည်ရပါတယ်။ အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ အမေရိကန်က အမွှာညီနောင်ကုန်သွယ်ရေးစင်တာကို လေယာဉ်နဲ့ဝင်တိုက်တဲ့ဖြစ်ရပ်နောက်ပိုင်း သမ္မတ ဘုရှ်က အာဖကန်ကို ဝင်တိုက်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ NATO တပ်တွေပါ ဝင်ပါတယ်။
၂၀၀၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ကနေ အကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းရေးနဲ့ ဘင်လာဒင်ရရှိရေးကို ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ပါတယ်။ ၁၀ နှစ်အကြာ၂၀၁၁ မေလမှာတော့ အမေရိကန်က ဘင်္ဂလာဒင်ကို သုတ်သင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီကိစ္စက ပြီးမသွားခဲ့ပါဘူး။ အာဖကန်မှာ တာလီဘန်တွေက ရှိနေမြဲ ရှိနေဆဲပါပဲ။ တောင်ပေါ်ဒေသက ထွက်တဲ့ မူးယစ်ဆေးတွေအပြင်၊ ဘာသာရေးကိုအသုံးချပြီးတော့ အမေရိကန်တပ်တွေကိုပြန်လည်ခုခံရေးဟာ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကြာတဲ့အထိကို ဆက်တိုက်ရှိနေတာပါ။
အခုသိကြတဲ့အတိုင်း အမေရိကန်၊ UK အပါအဝင် NATO တပ်တွေအားလုံး ပြန်ဆုတ်ပါပြီ။ အမေရိကန်ဆိုရင် ကဘူးလ်က Bagram Air Force Base လေတပ်စစ်စခန်းကြီးကို ကျည်တွေ၊ ကားတွေ အပြည့်နီးပါးထားပြီးတော့ ပြန်ဆုတ်လာခဲ့တာပါ။ အမေရိကန်အစိုးရရရဲ့ ပြောဆိုချက်အရဆိုရင် ၉၀ ရာခိုင်နှုန်း တပ်ဆုတ်ပြီးသွားပါပြီ။
ပေါ်လစီကိစ္စတွေ၊ စစ်ရေးတွေ၊ မေးစရာတွေကတော့ အများကြီးပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒီနေရာမှာ သမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒင်ရဲ့စကားကိုပဲ ထပ်ပြီးဘာသာပြန်ရအောင်ပါ။ သူက အမေရိကန်ဟာ အာဖကန်တိုင်းပြည်တည်ဆောက်ရေးအတွက် သွားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောခဲ့တာက “ခင်များတို့ ကိုယ့်ခြေထောက် ကိုယ်ရပ်ဖို့လိုပြီလို့ ” အာဖကန်ကို တည့်တည့်ပြောတာပါပဲ။
ဆိုလိုတာက အမေရိကန်ဟာ အာဖကန်ကိုဝင်တိုက်ပြီးတော့ နှစ်အနည်းငယ်လောက်မှာပဲ အစိုးရတစ်ရပ်ဖွဲ့ပေးတာတွေ၊ လည်ပတ်တာတွေကို လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း တာလီဘန်တွေကို အမြစ်ဖြတ်နိုင်ရေးကတော့ စစ်ပွဲဟာ နှစ်ပေါင်း ၂၀ သာကြာသွားခဲ့တယ် မပြီးပြတ်ပါဘူး။ စစ်ပွဲတစ်ခုမှာ အခြေခံအဆောက်အအုံတွေ သိမ်းတာမျိုးကို နိုင်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပေမယ့် အမြစ်ပြတ်သွားတာမျိုးမဟုတ်ပါ။
အထူးသဖြင့် ဘာသာရေးနတ်ဝေါ့တွေကိုအသုံးချပြီးတော့ အိုက်ဒီယော်လော်ဂျီရိုက်သွင်းတဲ့ကိစ္စရှင်သန်မြဲ ရှင်သန်ဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်းကြာလာလေ တာလီဘန်တွေဟာ နယ်စပ်မှာထိန်းချုပ်နယ်မြေ ပိုရလာလေဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ပါကိစ္စတန်၊ အီရန်တို့လို နယ်စပ်တွေမှာ ပိုအားကောင်းလာတာပါ။ တာလီဘန်ပြောခွင့်ရတစ်ယောက်က သူတို့ဟာ အာဖကန်မှာ ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့တောင် ဆိုထားပါတယ်။
အမေရိကန်အစိုးရက အာဖကန်အစိုးရကို တာလီဘန်တွေနဲ့ နိုင်ငံရေးစကားပွဲကနေ အဖြေရှာဖို့ တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တာလီဘန်တွေကတော့ (Upper Hand) အပေါ်စီးရမှ ဆွေးနွေးမယ့်သဘောရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း နယ်မြေထိန်းချုပ်မှုတွေကို ပိုပြီးတော့ ရအောင်ကြိုးစားနေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။
ရှေးရိုးစွဲဘာသာရေးအယူအဆနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ ချုပ်ချယ်ကန့်သတ်မှုတွေ အင်မတန်များပါတယ်။ ဥပမာ အမျိုးသမီးတွေ ကားမောင်းခွင့်မရတာ၊ ပညာရေးတန်းတူသင်ခွင့်မရတာ၊ လိင်အမြတ်ထုတ်ခံရတာ၊ မဲပေးခွင့်မရတာ၊ စတဲ့လူ့အခွင့်ရေးတွေ ချိုးဖောက်ခံရပါတယ်။ ၂၀၀၁ ကနေ ၂၀၂၁ ဒီကြားကာလမှာတော့ အာဖကန်အမျိုးသမီးတွေဟာ အထက်မှာပြောခဲ့တဲ့အခွင့်ရေးတွေ (အားလုံးလို့မဆိုလို) ရခဲ့ကြပါတယ်။
အခု တာလီဘန်တွေပိုပြီးတော့ ကြီးထွားလာတော့ ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့လူ့အခွင့်ရေးကို လိုလားတဲ့ အာဖကန်ပြည်သူတွေဟာ ကျီးလန့်စာစားဖြစ်လာပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ အာဖကန်က အမျိုးသမီးတွေက အစ လက်နက်ကိုင်ပြီး တာလီဘန်တွေကို တိုက်မယ်ဆိုတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။
အမေရိကန်ကတော့ အာဖကန်ပြည်သူတွေ ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ကို ဘယ်လိုတည်ဆောက်ချင်သလဲဆိုတာ အာဖကန်နဲ့ပဲဆိုင်တယ် အမေရိကန်နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ ပြောချလိုက်တာပါ။ ဒါကြောင့် အာဖကန်အစိုးရနဲ့ တာလီဘန်ခေါင်းဆောင်တွေ ညှိနှိုင်းပြီး ရရှိလာမယ့် နိုင်ငံရေးစနစ်တစ်ရပ်ဟာ၊ ဒါမှမဟုတ် ” နှစ်ဖက် တိုက်ခိုက်ကြလို့” ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ရလဒ်ဟာ အာဖကန်ပြည်သူတွေရဲ့ “အနာဂတ်” ဖြစ်တည်လာမှာပါ။
ဒီနေရာမှာ မြန်မာနဲ့ဆက်စပ်ပြီး ကျနော့်ပြောချင်တဲ့ မက်ဆေ့ကတော့ ကယ်တင်ရှင်မျှော်တဲ့ အယူအဆကို မေ့ထားလိုက်ဖို့ပါပဲ။ လာခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင် အမေရိကန်ဖြစ်ဖြစ်၊ UN ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ” မြန်မာနိုင်ငံ တည်ဆောက်ရေး” ကို သူတို့လုပ်ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ အာဖကန်နစ္စတန် မူဝါဒကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း နားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အဲဒီတော့ စစ်ပွဲတိုက်ရာမှာ အထက်မှာ ကျနော်ပြောခဲ့သလိုပဲ အခြေခံအဆောက်အအုံကို တိုက်ထုတ်နိုင်ရုံနဲ့ပြီးမသွားပါ၊ ဘိုးတော်ဘုရားခေတ်က မြန်မာနိုင်ငံမြေပုံကြီးဆိုတဲ့ ခင်များတို့ ကျနော်တို့ခေါင်းထဲက မြေပုံတွေကို မေ့ပစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အလားတူပဲ စစ်တပ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ ” နိုင်ငံရဲ့ကယ်တင်ရှင် ” ဆိုတဲ့အမြင်ကို “လှီးထုတ်ပစ်ဖို့” လိုအပ်ပါတယ်။
အဲလိုမဟုတ်ရင်တော့ တာလီဘန်ဆဲလ်တွေ ပြန့်လာသလို၊ မြန်မာနိုင်ငံက မသိစိတ်၊ သိစိတ်ထဲကိန်းအောင်းနေတဲ့ မဟာဝါဒီတွေ ကြီးစိုးလာနေရင် စစ်အာဏာရှင်တိုက်ဖျက်ရေးခရီးဟာ ကြန့်ကြာမယ်လို့သုံးသပ်ရပါတယ်။
ကိုဗစ်လူနာတွေထားဖို့ ကုတင်တွေ မွေ့ယာတွေနဲ့ သပ်သပ်ရပ်ရပ် ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ ထိုင်းစစ်တပ်
မားစ်ဂြိုဟ်သို့ မြန်မာ အင်ဂျင်နီယာ ဦးဆောင်စေလွှတ်ခဲ့တဲ့ ရဟတ်ယာဉ် ၉ ကြိမ်မြောက်ပျံသန်း